Agwaetiti Pọtugal kacha mara mma | Akụkọ Njem
O doro anya Portugal Ọ bụ otu n'ime ebe okpomọkụ na-ewu ewu maka ndị bi na mpaghara oyi na Europe. Ma karia nma ya nke ala ya na oke osimiri ya, obodo a nwere agwaetiti mara mma, nke di ebube na uzo ya.
Ihe dị mma banyere agwaetiti ndị a Portuguese bụ na ihu igwe na-ekpo ọkụ n'afọ niile, n'ihi ya ị nwere ike ịhazi nleta na mmasị gị. Taa, mgbe ahụ, agwaetiti ndị mara mma nke mara mma, ndị ị na-enweghị ike ịhapụ oge ọkọchị gị.
Portugal nwere obere agwaetiti ndị bụ obere obere ebe ihu igwe dị ọkụ n'afọ niile. Taa, anyị ga-ekwu maka Sao Miguel Island, Cape Verde, Armona Island, Madeira, Flores, Terceira, Pico, Porto Santo, Da Tavira Island na Faial Island.
La Agwaetiti Sao Miguel Ọ bụ nnukwu agwaetiti ịchọpụta ma nwee mmasị na ya. Ọ bụ akụkụ nke otu ndị Agwaetiti Azores ọ bụkwa ya kacha ìgwè. Nwere ọtụtụ ugwu mgbawa na kpomkwem n’ihi na mbido ya enwere otutu mmiri oku. N'oge ụfọdụ n'afọ, na mgbakwunye, site n'ụsọ oké osimiri ị nwere ike ịhụ whale na dolphin ma ị nwere ike ịme njem nlegharị anya iji nwekwuo ekele maka ụmụ anụmanụ ndị a. Nwere ike ịga ebe ụgbọ elu, enwe ọdụ ụgbọ elu, na oge kacha mma iji gaa bụ n’etiti Eprel na Nọvemba.
Ezigbo agwaetiti izu ike bụ ama ama Cabo Verde, ọ bụ ezie na ọ dị na Mozambique. Ọ bụ kpakpando nke agwaetiti mgbawa, iri na mkpokọta, na ọnọdụ ihu igwe niile. Nke ahụ bụ, ihu igwe dị ka akọrọ, ọ naghị adịkarị adịghị ekpo oke ọkụ ma ọ bụ oke oyi. Ọ bụ n'otu oge ahụ ebe ọdịnala, n'ihi ọnọdụ Africa ya.
Ọ bụ nnukwu njem nleta, ama. Isi obodo ya bụ Praia, nke bụ ebe ụlọ oriri na ọ hotelụ ,ụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na ndị ọzọ na-etinye. Oge kachasị mma iji gaa bụ site na November ruo June.
La Harmony Island Ọ bụ mpaghara Algarve ma bụrụkwa ebe dị anya site na njem nleta. Ọ dị nso n’ụsọ oké osimiri enweghị ụgbọ ala, mmadụ ole na ole ị na-eku ume ezumike ebe okpomọkụ. Agwaetiti ahụ nwere ụsọ osimiri na Atlantic na ọzọ na Osimiri Formosa. Ọ bụrụ na e nwere obere ebili, ha na-adị mma ma na-atọ ụtọ ọdọ mmiri. E nwere dunes jupụtara na ifuru, mmiri transperent na ọtụtụ Ogwe na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ ndị dị nso na jetty ebe ụgbọ mmiri tụbara gị.
Ferry were naanị nkeji iri abụọ. Ahapụrụ Olhao na Ọrụ ụgbọ mmiri na-aga n'ihu, n’afọ nile, ọ bụ ezie na ọ na-abịakarị n’oge okpomọkụ, July na August. N’akụkụ abụọ nke ụgbọ mmiri ahụ bụ osimiri Ría de Armona, nke nwere ọkọlọtọ na-acha anụnụ anụnụ. Osimiri Atlantic dị n'akụkụ nke ọzọ nke agwaetiti ahụ, njem nke karịrị nanị kilomita ebe ị nwere ike ịhụ ọmarịcha ụlọ ndị ọkụ azụ. Ga-ahụ ebe obibi agwaetiti ahụ na ụlọ ọrụ ndị njem maka ebe a na-akwụ ụgwọ njem.
I rute n’akụkụ osimiri ị gafere ebe ụkwụ na-aga nke na-efefe na ya odo odo, doturu ya mauves. Enwere akwa dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke na-akpọga gị n'akụkụ nke agwaetiti ahụ ebe ebili mmiri na-ebili ma na-ada ma ị na-ahụ ọbịbịa na ịpụ nke ụgbọ mmiri. Osimiri ikpeazụ dị ukwuu ma nwee obi ụtọ na e nwere ụlọ osimiri na-agbazinye hammocks, mesịa ma na-ere ihe oriri na ihe ọ drinksụ drinksụ.
Madeira bụ otu n’ime agwaetiti ndị a kacha mara amara na Portugal, na North Atlantic. Ọtụtụ nde ndị njem nleta na-eleta ya kwa afọ ma nwekwaa ihu igwe dị mma. Ọbụghị naanị osimiri, ma ọ bụrụ na ọ bụghị igbo ohia nke na-akpọ nyocha na ihe omume dịka backgba ịnyịnya, kayaking, golf, paragliding, ịkụ azụ ...
Agwaetiti dị narị kilomita isii na ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke Morocco ma ọ bụ karịa ma ọ bụ obere otu anya si n'ụsọ oké osimiri Portuguese. Kpachara anya, Madeira abụghị otu agwaetiti, kama ọ bụ agwaetiti nwere agwaetiti anọ nke mejupụtara otu. Ọ bụ nsụgharị Portuguese nke Hawaii, nwere osimiri, ugwu mgbawa, ọdọ mmiri, na oke ọhịa.
La Agwaetiti Pico dị na Azores ma ama maka ugwu mgbawa nke otu aha. Akụ ya na ebe ndị njem kachasị ewu ewu bụ Ponta do Pico, ugwu kachasị elu na mba ahụ. N'ezie, ịrịgo n'elu bụ ihe onye ọ bụla na-efu. Ma gafee Pico bụ agwaetiti na-acha nnọọ akwụkwọ ndụ, na-atọ ụtọ ịchọpụta ... na uto. Na na Pico bụ onye na-emepụta mmanya, ị maara? Ubi vaịn bụ n'ezie PEbe ihe nketa ụwa maka ọdịbendị dị mkpa maka akụ na ụba Portuguese.
Fer ga-aga Pico n’ime awa isii site na ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgbọ elu. Fromga Lisbon bụ echiche kachasị mma mana ị nwekwara ike ịmalite site na Horta. N'ime agwaetiti ndị Portuguese anyị na-enyocha, anyị enweghị ike ichefu Flores, agwaetiti kachasị foto nke niile. Ọ dị n'ime ikpo okwu Azores, n'ime otu ọdịda anyanwụ, oge kachasị mma iji leta ya bụ site na etiti Eprel rue etiti Ọktọba. Ekwuwaala na Flores Island bụ ebe nchekwa nke Biosphere nke UNESCO na 2009.
Ọ mara mma nke ukwuu nke na ọ na-esiri ike ịchọta ebe obibi n'oge ọnwa ọkọchị ka ị ghara ịga ebe ahụ ma hapụ ka ọdịmma gị kpebie. Mmemme! You ga-ahụ agwaetiti ahụ n'anya: ị nwere ike na-ejegharị, na-achọpụta mmiri iyi ya dị egwu, ịrịgo, igwu mmiri, na-ele whale, kayak ...
La Ilha da Tavira dị na Atlantic ọ dịkwa mma ụbọchị njem. O nwere ezigbo ihu igwe ma oge na-ekpo ọkụ ọ na-ejupụta. A ghaghi ikwu ya na o nwere narị mita ole na ole n'ụsọ oké osimiri. N’agwaetiti super njikere maka njem ya mere enwere ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ mmanya, ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ ndị njem na-ahazi ụbọchị na ọrụ ya. Ọ bụ, dị ka aha ahụ na-egosi, na Tavira, wee banye n'ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri na tagzi mmiri.
Tavira Ọ bụ naanị 11 kilomita ogologo ma ya aja aja na mmiri ha na-acha anụnụ anụnụ ha agaghị ahapụ gị. Na mgbakwunye enwere ọtụtụ nnụnụ na lagoons na ebe ahụ, mara mma pink flamingos. Lee ihe ngosi! Ọzọ agwaetiti mara mma bụ Agwaetiti Terceira, agwaetiti nke atọ kachasị na Azores, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke kachasị emepe. Ma lee, ịma mma ya dị kpọmkwem na ọnọdụ a na-amaghị nwoke na ile ọbịa nke ndị ya.
Na Terceira ka enwere Castle nke San Juan Bautista, ebe e wusiri ike na-alụ ọgụ megide Spanish, na ọ dịghị onye nwere ike ịhapụ ebe a na-enweghị akatabi okop na mmanya na-acha akwụkwọ ndụ, ọpụrụiche mpaghara. Ọ ka mma ịga site na Mee ruo Ọktọba. Ma ọ bụrụ na ị na-achọ osimiri mgbe ahụ ebe a na-aga Agwaetiti Porto Santo, n'ebe ugwu nke Madeira. Obi abụọ adịghị ya na ụfọdụ bụ osimiri kachasị mma na Portugal, nwere aja ọcha mara mma na mmiri turquoise.
Ma Porto Santo nwekwara akụkọ ihe mere eme, na Oplọ Christopher Columbus, dịka ọmụmaatụ, ụka nke narị afọ nke XNUMX, ụlọ nke narị afọ nke XNUMX… Ihe ọma banyere Porto Santo bụ na a pụkwara ileta ya n'afọ niile. Obere agwaetiti, mana mara ezigbo mma. 100% osimiri, ndakpu mmiri na snorkeling. Anyị na-eru nso na njedebe nke ndepụta: Agwaetiti Faial bụ Blue Island, ke ufọt Azores na ọcha osimiri, obodo Horta na ugwu mgbawa.
Na-enyocha Caldeira na Faial bụ a ga njem nleta. Otu na-anwale nri mpaghara. Mgbe aga? N’agbata Mee na Ọktọba.
Dịka ị pụrụ ịhụ, kwa ọnwa nke afọ enwere agwaetiti Portuguese iji gaa, ọ dabere na ụdị ọrụ ọdịdị ala ị na-achọ mana n'ụzọ doro anya, na oke osimiri, anwụ na ájá nwere mkpuchi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Portugal » Agwaetiti kacha mma Portuguese